Izinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb ziza kuphinda zivulwe nini ibe ziza kuvulwa phi? - Indawo Yoncedo yeAirbnb
Ukuze ufumane iindlela zokurhoxisa nokubuyiselwa imali onokukhetha kuzo, khetha ukubhukisha kwiphepha elithi Uhambo. Ipolisi yethu yemeko ongenakuyinceda isebenza kukubhukisha okuthile kuphela. Ukuba usuku lwakho lokungena lusemva koSeptemba 15, phinda ujonge apha ngoAgasti 15, 2020 ukuze ubone inkcazelo ehlaziyiweyo.
Izinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb ziza kuphinda zivulwe nini ibe ziza kuvulwa phi?
Imiqathango yokungatsalwa kwemali omele uyibhatale xa kuphinda kuvulwa Izinto Ezinokonwatyelwa zika-Airbnb ngexesha leCOVID-19
Zithini izikhokelo zempilo nokhuseleko zeendwendwe ezikwinto enokonwatyelwa kwiingingqi ezivulileyo?